“Raharaha malety” sy “fizarana volabe”: depiote 79 hoe nandray… 50 000 000 Ar avy | NewsMada
Herintaona mahery aty aoriana, mipongatra indray ilay “Raharaha malety” sy “fizarana volabe” tamin’ny baoritra teny amin’ny hotely lehibe iray eny Ivato. Fantatra fa depiote miisa 79 mpomba ny fitondrana tamin’ny fotoan’androny ireo nandray vola 50 000 000 Ar avy ireo amin’izany. Efa eny am-pelatanan’ny Fitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly (Pac) izao ny raharaha.
Tsy ho afa-bela. Vita ary nikatona tanteraka ny fanadihadin’ny Bianco ny momba ireo depiote miisa 79 ahina ho nanao kolikoly tamin’ny taon-dasa. Nalefa eny amin’ny Rantsam-pitsarana misahana ny ady amin’ny kolikoly ny raharaha amin’izao fotoana izao ka andrasana ny ho tohiny. Efa nanaovan’ny depiote ho an’ny fanovana miisa 73, andaniny, hetsika sy diabe teny amin’ny Bianco Ambohibao ny fametrahana fitoriana momba izany tamin’ny taon-dasa.
Notorin’ny depioten’ny fanovana teny amin’ny HCC
Nialohavan’ny fitoriana nataon’izy ireo, ny 5 avrily 2018 teny amin’ny HCC, noho ny fahitan’izy ireo fa nisy ny kolikoly avo lenta nampandaniana ireo lalàm-pifidianana teny amin’ny Antenimierampirenena, ny 3 avrily 2018. Niteraka tahotra ho an’ireo mpanohana ny fitondrana tamin’izany ny raharaha ka nilazan’ny sasany fa resaka efa tamin’ny taona 2016 izany, rehefa nipoitra ny horonantsary momba io volabe io. Tao ny niteny fa fizaran-tsolika ho an’ny depioten’ny fitondrana izany. Na izany aza, nisy ny fivoriana nikaton-trano teny amin’ny hotely iray teny Ivato nialoha ny nandaniana ilay lalàna. Nivoaka ny resaka amin’ny fanomanana kolikoly sy “malety” tamin’izany.
Tsy nijanona teo anefa izany fa nisy ny fampiantsoana nataon’ny Bianco ho an’ireo mpitory, nahitana ireo depioten’ny fanovana, taty aoriana.
Niasa mangina tao anatin’ny herintaona ny Bianco
Niasa nangina izany ity rafitra miady amin’ny kolikoly manana foibeny eny Ambohibao ity ka izao nalefa eny amin’ny Pac izao ny antontan-taratasy momba ireo depiote miisa 79.
Tsiahivina anefa fa maro amin’ireo depiote miisa 79 ireo mbola niverina mirotsaka hofidina solombavambahoaka indray amin’ity indray mandeha ity. Niova loko, nanao mahaleo tena, ny maro amin’izy ireo. Ao koa anefa ireo nanaraka ny antoko iray lehibe amin’izao fotoana izao… Miketrika ny tsy ho tratry ny aloka ?
Araka izany, tsy tokony hisy ho afa-bela na iza na iza ireo nanao kolikoly tamin’ireny fotoana ireny. Inoana fa hiasa araka ny tokony ho izy tsy misy tsindry na teritery ny eo anivon’ny Pac manoloana ity resaka kolikoly sy “malety” ity. Sambany hisy depiote teo aloha higadra izany izao?